Horumarka Dekeda Berbera: Waxqabadka Salka Balaadhan, Dhismaha Dekeda cusub, Tabobarada Shaqaalaha, Keenista Taagag Casriya, Dhisme Laba Dabaq ah, Doonyo Casriya,Nalalka Bada ee Habeenkii....
Friday October 02, 2020 - 17:06:01 in Wararka by Super Admin
Hargeysa(Xogreebnews)-Taarikhda Somaliland, gaar ahaan Dekeda Magaalada Berbera waxa ka muuqda sadexdii sanadood ee u dambeeyey horumar baaxad leh oo dhinac walba ah. Guulahana waxa ku suntan Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Md Muuse Biixi Cabdi iyo Maareeyihiisa Dekedaha Somaliland Eng Siciid Xasan Cabdilahi oo noqday shaqsi isbedel taaba-qaaday ku sameeyey, isla markaana ka dhigay dekeda Berbera mid ganacsatada iyo umadaha kalee danaynayaa soo jiidanaysa.
Sidaas daraadeed, waxaynu Maanta qormadeenan kusoo qaadan-doonaa horumarka baaxada leh ee sadexdii sanadood ee u dambeeyey ay ku taalaabsatay dekeda Berbera oo maanta noqotay Mid Caalamiya, isla markaana ka gudubtay localnimadii.
Maareeyaha Dekedaha Somaliland Eng. Siciid Xasan Cabdilahi, waxa uu la yimi hanaan hoggaamineed oo wadaniyadii ka muuqato iyo dedaalo uu ku horumarinaayo Dekeda Berbera, oo hada ah mid ka dhisan Qalab ahaan, shaqo ahaan iyo aqoon ahaanba. Dekeda Berbera waxay maanta leedahay shaqaale xirfadoodu sarayso, qaarkood uu Maareeye Siciid Xasan Cabdilahi kusoo tabo-baray dalka dibadiisa, sidoo kale waxay leedahay shaqaale lagu tabo-baray gudaha dalka oo weliba dhowr qaybood ah.
Maareeye Siciid Xasan Cabdilahi, waxa uu shaqada Dhismaha Dekeda cusub ee Berbera ku hayaa Kormeer joogto ah, kaasoo todobaadle ah, isla markaana ujeedka ugu weyn ee Maareeyuhuu yahay in dhaxal umada Somaliland u aydo ha u noqoto.
Maareeye Siciid Xasan Cabdilahi waxa uu noqday, Maareeyihii koowaad ee ay Mahadisay Dekeda Berbera, waxyaabo Tiro badan oo kale kusoo kordhiyey Dekeda sida nalalka Bada ee habeenkii Iftiima, iyadoo maraakibta hada habeenkii lasoo xidho. Sidoo kalena dekedu shaqayso 24 saacadoodba, nidaamka shaqaalaha iyo shaqada oo Casriya, taasina waxay fudaydisay inuu laban-laabmo ama sadex jibaarmo hananka shaqo ee dekedu. La soco qaybaha dambe